Alert Image (1)
Daw Aung San Suu Kyi's interviews (1)
internation language (1)
ဂုဏ်ယူမိပါတယ် ငယ်သူငယ်ချင်းရေ (1)
တစ်နေ့တာ တာဝန် (1)
တို့ဖေဖေ တို့မေမေ (1)
ဓါတ်ပုံ ကဗျာ (4)
ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း (1)
နတ်သမီးမဟုတ် သရဲမကျ (1)
ပလက်ဖောင်း အနုပညာ (1)
သတင်း ဆောင်းပါး (3)
သတင်းမှ တွေ့ရှိချက် (1)
သူတို့မျက်စိရှင်းရှင်းနှင့် ပျော်ကြလေပြီ (1)
အဆုံးမရှိ ညီလာခံ (2)
အဖေသို့ . . . (1)
အမေ့အတွက် ကဗျာများ (1)
ဒေါ်ရီဝေ ကဗျာ (1)
ပေါက်ကရ စကားစ (1)
ပျော်ရွင်စရာ ခရစ်စမတ် (1)
နွေဦးဝေ၏ ကဗျာ (1)
version အမျိုးမျိုးနှင့် Let It Be ကိုခံစားကြည့်ကြပါ
ထိထိမိမိအော်ချင်ရင် . . . . .
biggest သရဲတော့မကြောက်ပါ ဒါပေမဲ့ သရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ biggest ရဲ့ပေါက်ကရလုပ်ရပ်လေးတွေတော့ ပြောပြချင်တယ်။ ပထမကရေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး ဒါပေမဲ မနိုင်းနိုင်း၊ ကိုရန်အောင်၊ ကိုကောင်းကင်ကို၊ ကိုမာန်လှိုင်းငယ် နဲ့ တခြားဆိုဒ်အချို့မှာ သရဲတွေ၊ ဝိဥာဉ်တွေ အကြောင်းရေးထားတော့ biggest လည်းရေးချင်လာတာနဲ့ရေးဖြစ်သွားတာပါ။ biggest သရဲကို အင်မတန်တွေ့ချင်ပါသည်။ သရဲမွေးထားတဲ့ လူများရှိရင် biggest ဆီတစ်ကောင်လောက်ပို့ပေးပါ။ Interview ချင်လိုပါ။ ကဲ ပေါက်ကရ သရဲ diary စပြီ . . .
biggest အဖိုး(အဖေဘက်)သေသွားတယ် အဲဒီတုန်းက biggest က ၅ တန်းပဲရှိသေးတာ။ ပြည်မြို့မှာဆုံးတာ အဖိုးမွေးရပ်မြေပါဘဲ။ အသည်းသန်ဖြစ်ကထဲက biggest တို့ရောက်နေတာပါ။ အဖိုးက မြေးတွေထဲမှာ biggest ကိုအချစ်ဆုံးပဲ။ အဲဒါအဒေါ်တွေက စိုးရိမ်တယ် တော်ကြာ biggest ကိုစွဲပြီးသူတို့အဖေမကျွတ်မှာကို စိုးရိမ်တယ်။ အပ်ချည်နဲ့အရပ်တိုင်းတာတွေ ဘာတွေလုပ်တယ်။ ဘာတွေမှန်းလဲ မသိဘူး အစုံပဲပြုလုပ်တာ။ biggest ကျတော့အဖိုးကို biggest အနားမှာခေါ်ထားချင်တယ်။ အဲဒါနဲ့ အဖိုးဆံပင်နှုတ်ပြီး အဒေါ်တွေမသိအောင်ယူထားလိုက်တယ်။ အဖိုးများပြန်လာတောင်းမလားလို့ အခုထိမျှော်နေတာ။
biggest ရဲ့ အဖွား(အမေဘက်)ဆုံးတယ်။ အဖွားကကျတော့ biggest အိမ်မှာဘဲနေတာ။ biggest နဲ့သိပ်မတည့်ဘူး။ မတည့်အတူနေ မြေးအဖွားနှစ်ယောက်ပေါ့။ အဖွားဆုံးတာညင်ညင်သာသာပဲ သိတောင်မသိလိုက်ရဘူး။ ဒီလိုနဲ့ဆုံးဆုံးခြင်းပဲ အဖွားကို ရေခဲတိုက်ပို့တယ် အဲဒီမှာ စပ်စုချင်တဲ့ biggest လိုက်သွားတယ် အာအများကြီးပဲ (အလောင်းတွေ) အထဲဝင်တော့ အဒေါ်ကမဝင်ရဲလို့ အမေနဲ့အတူ အပြင်မှာနေခဲ့တယ်။ အဲဒါဦးလေးငယ်နဲ့ biggest ဘဲဝင်ကြတယ်။ ဦးလေးက ငွေရှင်းနေတာနဲ့ အဖွားအလောင်းနားမှာ biggest ဘဲကျန်တော့တယ်။ ဘယ်ရမလဲ biggest လည်းကြားဖူးနားဝတွေကို စမ်းသပ်တော့တာဘဲ။ အဖွားအကျီိံ ကြယ်သီးတစ်လုံးဖြုတ်ယူလာတယ် ပါးစပ်ကလဲပြောလိုက်သေးတယ် "လိုချင်ရင် လိုက်ယူလို့" ။ biggest အဖွားက ကြယ်သီးဖြူတ်ဝတ်တာ၊ ကြယ်သီးမရှိဘဲ ဝတ်တာတို့ဆို အရမ်းစိတ်ဆိုးပဲ။ biggest ဆိုအမြဲအဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြဲအဆူထိနေကြ။ ညကျတော့ biggest စောင့်နေတယ် အဖွားများလာယူမလားလို့ စောင့်ရင်း စောင့်ရင်း အိပ်ပျော်သွားတယ်။ မနက်မိုးလင်းတော့ အဒေါ်ငယ်ပြောတာကြားနေရတယ် တကယ်လိုလို အိမ်မက်လိုလို အဖွားသူ့ဆီကိုလာပြီး ဘာတုံးမသိဘူး လာပြောတယ်တဲ့ သူလည်းသိပ်မကြားရဘူးတဲ့။
နောက်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်အိမ် ညသွားအိပ်တော့လည်း ဒီလိုဘဲ. . .
သူအိမ်ရဲ့ မျက်စောင်းထိုးအိမ်လူမရှိတဲ့ အိမ်မှာကြောင်သရဲ ရှိတယ်ဆိုလို biggest အပြေးသွားကြည့်ရသေးတယ် ကြောင်အမည်းကြီး တစ်ကောင်တော့တွေ့တယ်။ ဘယ်လိုခြောက်တာလည်းသိအောင် ကြောင်ကိုသူငယ်ချင်းမသိအောင် အိပ်ယာထဲခေါ်သိပ်တာ အိပ်ပျော်သွားတယ် မနက်မိုးလင်းတော့ကြောင်မရှိတော့ဘူး သူငယ်ချင်းကိုမေးကြည့်တော့သူလည်းမသိဘူးတဲ့
နောက်. . .
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Happy World သွားတော့လည်း ကံကောင်းလို့မလျှော်ရတယ် အရုပ်တွေကို လျှောက်ကိုင်ကြည့်တာ အရုပ်တွေ ရပ်ကုန်လို့ မသိမသာပြန်ထွက်လာခဲ့ရတယ်
သရဲအိမ်တုံးကလဲ ဒီလိုဘဲ. . .
သရဲအိမ်ရဲ့တစ်နေရာမှာ အဲဒီကဝန်ထမ်းကောင်လေးတစ်ယောက်စောင့်တယ်။ အဲ့ဒီနေရာက ကိုယ့်ကိုကိုဘဲကြည့်ကြည့် သူများဘဲ ကြည့်ကြည့် အရာင်တွေထွက်တဲ့ နေရာမှာ အဲဒီကောင်လေးက ထွက်လာပြီး ဘယ်ကဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာလာပြောတာပါ ဘယ်ရမလဲ အာဂ biggest အားရပါးရကို ကောင်ကလေးကို ထိုးပစ်လိုက်တယ် "ကျွန်တော်လူပါဗျာ ဒီကဝန်ထမ်းပါ" ဆိုပြီးပြောယူရတယ်။ တော်သေးရဲ့ နှာခေါင်းအရော်မပေးလိုက်ရတာ
ဤ သည်ကား အနော် biggest ၏ သရဲဆိုသောအရာတွေနှင့်ထိတွေမှုတွေ ဘဲဖြစ်ပါသည်
Posted by biggest | Permalink |
Human Rights No.(30)
No One Can Take Alway your Rights
Human Rights No.(29)
Human Rights No.(28)
Human Rights No.(27)
Human Rights No.(26)
Human Rights No.(25)
Human Rights No.(24)
Human Rights No.(23)
Human Rights No.(22)
Human Rights No.(21)
Human Rights No.(20)
Human Rights No.(19)
Human Rights No.(18)
Human Rights No.(17)
Human Rights No.(16)
Human Rights No.(15)
Human Rights No.(14)
Human Rights No.(13)
Human Rights No.(12)
Human Rights No.(11)
Human Rights No.(10)
Human Rights No.(9)
Human Rights No.(8)
Your Human Rights all protected by law
Human Rights No.(7)
We all equal before the law
Human Rights No.(6)
Human Rights No.(5)
Human Rights No.(4)
Human Rights No.(3)
Human Rights No.(2)
Human Rights No.(1)
ဤ နေရာတွေ၌ ကလိရန် အိမ်ငှားထားသည်။ အိမ်ရှင်များ သဘောကောင်း မကောင်း စမ်းသပ်ဆဲ ကာလဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာမလေးတွေကို မြန်မာပီသစေချင်သော မြန်မာတဦးပါ။ မြန်မာပြည်နဲ့ဝေးနေပေမဲ့ မိဘရင်ခွင့်နဲ့တော့ မဝေးတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။
Myanmar New Paper
ဟဲလို biggest ၏ဘော်ဒါ ဘော်ကျွတ် သူငယ်ချင်း ရောင်ရင...
အဖွားမာသို့မွေးနေ့ဆုတောင်း အဖွားနေကောင်းပါစ ကျမ်း...
စောင့်ခိုင်းလိုက်တာ တော်တော်ကြာသွားတယ်နော်။ အရမ်းစ...
ဟဲလိုအနော်၏ ဘလော့သူငယ်ချင်းများ အရာအားလုံးပြည့်စုံ...
Hello biggest ရဲ့ သူငယ်ချင်းများ မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်...
ံHello Biggest၏ သူငယ်ချင်းများ နေကောင်းပါစ။ ပျော်ရ...
Hello biggest ၏ blog ဘော်တာ ဘော်ကျွတ်များ အားလုံးက...
Hello biggest blog ကိုလာလည်ကြကုန်သော biggest ၏ ကို...
အဖေသို့ . . . နွေဦးရာသီမှာ အဖေဟာ သမီးအတွက် အရိပ်...
လူတချို့ လူတချို့ မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာ လူတချို့ ...
ခေတ်ပြိုင်မှ ကဗျာလေးကို ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။...
ဖြစ်ခွင့် ဖြစ်ချင်တာတွေသာ ဖြစ်ခွင့်ရရင် ငါဟာ. . ....
တခါတရံ(သို့)အမြဲတမ်း ကြည့်မရံကြည့်မရတဲ့သူများ big...
ဒီကဗျာလေးကိုတော့ လူတိုင်းသိကြပါတယ် ငယ်ငယ်ကတိုင်ခုထ...
တို့တွေငယ်ငယ်က သင်ခဲ့ရသော ကဗျာပါ။ စတုတ္တတန်းဖတ်စာအု...
ဆောင်းတွင်းလေး ဆောင်းတွင်း အေးအေး နှင်းဖြူဖွေးဖွေ...
biggest မရှိတုံး biggest blog ကိုလာလည်ကြတဲ့သူငယ်ချ...
အမေသို့ ပေးပို့လွှာ အမေက. . . ပညာတက်ကြီး ဖြစ်စေချင...
biggest ၏ကြောင်တောင်တောင် အူကြောင်ကြောင် စိတ်ကူးလေ...
biggest cbox တွေ တော်တော်များများလိုက်ကြည့်ပြီး စိ...
အခုတလော ဓါးပြတွေပေါလှချည်လား။ ဟိုလူ့လိုက်တိုက် ဒီလ...
Biggest ကတော့ follower ဖြစ်နေပြီ။ သူများတွေက ဘာေ...
သင်ပုန်းချေနိုင်လား သားငယ်လူချော ကျောင်းသားလေး ပည...
စက်တင်ဘာရဲ့ ကြွေးကြော်သံ ရွှေဝါရောင် လှိုင်းပုတ်သ...
biggest သရဲတော့မကြောက်ပါ ဒါပေမဲ့ သရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ b...
အနော်ရဲ့ ပေါက်ကရတွေကို အချိန်ပေး၍ ဖတ်ပေးသွားတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်